ULAHLEKO LOKUPHINDA KWAKHONA - 'UKUSUSELA KWIXESHA ELINGENAMMISELO' -IXESHA LESI-6, ISIQENDU 9 - KUSUSELA KWAPHAKADE KUDE KUSE EPHAKADENI
Uandrew Lloyd Webber
Buyela Kwinqanaba Elizayo Ii
UKULAHLEKA KWEXESHA, Ixesha lesi-6, Isiqendu 9: Ukusuka kuNaphakade
Oku kulandelayo kukuphinda kwakhona Ilahlekileyo yexesha le-6, Isiqendu 9: ngonaphakade. Baninzi abaphangi abalandelayo.
Jonga ibhlog yeendwendwe zebhlog ezilahlekileyo lemvulube.blogspot.com yohlaziyo oluhambelana nokulahleka kwemihla ngemihla.
KULAHLEKILE yehlise kancinci okokugqibela ngokuhlwanje ukuze ithathe ababukeli bangene nzulu kubomi bomnye wabalinganiswa abangaqondakaliyo, URichard Alpert . Ngenxa ye Ukususela kwixesha elingenammiselo (nto leyo yesiLatin ‘ukusukela emaphakadeni’) sazi izinto ezimbalwa ngoRichard. Sasisazi ukuba akafi, uloluhlobo lomcebisi UYakobi , weza esiqithini kwiLiwa eliMnyama, kwaye unezikhwebu ezimangalisayo ezakha zaba zezomntu. Into esingazange siyazi kukuba kwakutheni ukuze uRichard abe ngu-35 unaphakade, yintoni ubudlelwane bakhe ngokwenene noYakobi, kwaye kwakutheni ukuze abe kwiThe Black Rock. Isiqendu sokugqibela sizise ezo mpendulo nangaphezulu:
U-Ab Aeterno wayeyinto encinci yokuhamba kwesi siqhelo sesiqhelo sonyaka. Kwakungekho flash-icala, kodwa endaweni yoko uninzi lwesiqendu senzeka njenge-flashback.
Umboniso waqala ngomboniso owawuyinxalenye yokuqala yesiphelo seXesha lesi-5 (Isiganeko). UJacob undwendwela u-Illana kwisibhedlele saseRussia. Indawo yandiswa ukusibonisa ukuba uJacob unike u-Illana umsebenzi wokukhusela abagqatswa abathandathu abaseleyo (ngoobani UJack Shephard, uHugo Reyes, uJames Ford, uSayid Jarrah, uSun / uJin Kwon , kunye UKate Austen ). UJacob wamxelela nokuba acele uRichard Alpert amnike eminye imiyalelo. Emva kwesi siqithi, xa u-Illana ebuza uRichard ukuba enze ntoni ngokulandelayo, uyaphazamiseka ngokungummangaliso, njengoko ebekhona kulo lonke ixesha lonyaka. Uxelela wonke umntu ukuba bonke ba and le kwaye basesihogweni phambi kokuba abambe itotshi abaleke aye ehlathini.
Emva koko singena nzulu kwi-flashback, eyasisa kwi-1867 kwiiCanary Islands. Umfazi wakhe, UIsabella , uyagula kakhulu kwaye uRichard uthatha imali encinci (kunye nentsimbi yomqala ka-Isabella) ukuhlawula ugqirha. Ukhwela imvula kuphela kugqirha amxelele ukuba akanamali yaneleyo. URichard uzithatha kakubi ezi ndaba kwaye ngengozi abulale ugqirha ngexesha lomzabalazo wamayeza. URichard uthatha amayeza abaleke aphume aphume endlwini. Ufika ekhaya kuIsabella, kodwa ngelishwa sele eswelekile. URichard usiwa ejele kwaye uxelelwe ngumfundisi ongenakuxolelwa ngesono sokubulala kwaye uya kuxhonywa kusasa. URichard unxiba ngokungxengxezelekileyo kwaye uthi uyakwenza naluphi na uhlobo lokuzohlwaya ukuze abaleke esihogweni. Umbingeleli akashukumi, ebonakala emhle ngokungathandabuzeki.
Ngaba isigebenga sikaFrankenstein sinegama
Ngosuku olulandelayo uRichard uziswa kuMnumzana Whitfield, omthengayo njengekhoboka lokusebenza kwiThe Black Rock (yiyo loo nto ke wayebotshiwe!) Kuba uRichard uthetha isiNgesi kwaye unezandla ezomeleleyo (wajonga nasemlonyeni wakhe, kodwa andiqinisekanga ukuba ibisithini). ILitye eliMnyama libanjwa sisaqhwithi esibi (esibangelwa nguJacob?) Kwaye sibalekele kumfanekiso oqingqiweyo oneminwe emine, siwudilize emaqatheni. Amakhoboka akhwele abulawa nguMnu Whitfield, kodwa ngaphambi nje kokuba abulale uRichard, uSmokey uyeza abulale onke amalungu abasebenzi, kubandakanya noMnu Whitfield. URichard uhlala ekhonkxiwe iintsuku ezimbalwa, ngaphambi kokuba iNdoda eMnyama ize kumsindisa. Indoda eMnyama iyamkhulula, isithi Kulungile ukukubona uphuma kula matyathanga, lo mgca ufanayo wasetyenziswa nguFlocke xa wabona uRichard kwiNkulumbuso yeSizini 6 ( X ). Indoda eMnyama ixelela uRichard ukuba uJacob unomfazi wakhe kwaye ukuze ambuyise uRichard kufuneka amhlabe esifubeni ngaphambi kokuba athethe igama elinye (into efanayo noDogen uxelele uSayid ngokubulala uFlocke kwiSizini 6, Isiqendu 6, iSundown).
URichard uhamba waya kumfanekiso oqingqiweyo oneminwe emine kwaye uzama ukubulala uYakobi, kodwa akaphumeleli. URichard uxelela uJacob ukuba ufile kwaye usesihogweni, nto leyo uYakobi ayiphikayo. UJacob emva koko wamdada kaninzi uRichard elwandle ukubonisa ukuba uyaphila. UJacob ugcwalisa uRichard kwimisebenzi yobudlelwane bakhe noMntu oMnyama, engqina ukuba yenye yezona ngxoxo zinengqiqo esizivileyo ngeli xesha lonyaka. UJacob uthelekisa ububi newayini ekwibhotile yewayini, esithi esi siqithi sifana nekhokho. Ngaphandle kwecork, iwayini ibinokuphuma ebhotileni. Ngaphandle kwesi siqithi, ububi bunokusasazeka buchaphazele umhlaba wonke. UJacob usebenza ukugcina ububi, okanye iNdoda eMnyama, equlethwe. UJacob uzisa abantu kwisiqithi, apho i-past yabo ingasenamsebenzi, kwaye ebavumela ukuba bakhethe phakathi kokulungileyo nokungalunganga. URichard uthi uJacob anganefuthe kwisigqibo sabantu, kodwa uJacob uthi akafuni ukuphazamisa. Emva koko unika uRichard umsebenzi wokulamla phakathi kwakhe nabantu abazisa kwesi siqithi. URichard uyavuma kwaye kuba uJacob akakwazi ukumdibanisa nenkosikazi yakhe, okanye ukumkhulula kwizono zakhe kwaye umsindise esihogweni, ukhetha ukungaze afe. UYakobi uyamchukumisa, kwaye, apho siya khona, siyazi ngoku kwaye kutheni uRichard engafiyo.
URichard ubuyela kwiNdoda eMnyama, oxelela uRichard ukuba angatshintsha ingqondo, unokuhlala ebuyela ecaleni lakhe. URichard umnika isipho esivela kuYakobi, ilitye elimhlophe eliqaqambileyo. Thatha loo nto, Indoda eMnyama: inqaku elinye likaYakobi.
Sibona uRichard ngo-2007, eqhubeka nohambo lwakhe ehlathini. Ukhwaza esibhakabhakeni ukuba utshintshe ingqondo kwaye angathanda ukuba kwiqela leNdoda eMnyama ngoku. Ndiyayiqonda indlela anokuthi uRichard angonwabi ngayo emva kwalo lonke elixesha noJacob, kodwa ayikokugqibela emva komdlalo ukutshintsha amaqela? UHurley uyabonakala, aze alamle incoko phakathi kuka-Isabella noRichard abaswelekileyo. U-Isabella uxelela uRichard ukuba kufuneka ayeke uMntu oMnyama ukuba angahambi kwaye ukuba akahambi, sonke siya esihogweni.
U-Ab Aeterno uphela nge-flashback (ixesha lokugqibela elenzekayo lalikwisizini yesi-2, kunye nesiqendu uDave). UJacob uzise uMntu oMnyama ibhotile yewayini, bayancokola ngakumbi malunga nendlela uMntu oMnyama aya kuyifumana ngayo indlela yokubulala uYakobi, okanye umntu oza kungena endaweni yakhe, ukuze ashiye esi siqithi. Umfanekiso wokugqibela woMntu oMnyama ubetha ibhotile yewayini, ekhulula iwayini kwaye edlula i-cork. Eerie!
Ke kukuphindaphinda okude, kodwa sifunde lukhulu phezolo. Asikufundanga nje kuphela umva kaRichard, safunda ngakumbi ngoYakobi noMntu oMnyama (ndinqwenela ukuba silazi igama lakhe!). Esi siqendu besizele zizalathiso zesihogo, ezilungileyo nezimbi, ezilungileyo nezingalunganga, ukufa, nomnyama nomhlophe. Esinye sezifundo ezibaluleke kakhulu asizisele sona u-Ab Aeterno yayikukuba uYakobi akasikhuseli kwisiqithi, kodwa ukhusela umhlaba kububi. Umbono onomdla, kodwa ngaba siqinisekile ukuba iNdoda eMnyama imbi kwaye uYakobi ulungile? Andiqinisekanga okwangoku.
Sinikwe ukutya okuninzi okucinga kule veki. Kushiyeke nje iziqendu ezisibhozo, u-Ab Aeterno uncede abalandeli ukuba bambe nzulu kwiintsomi zesiqithi. Into eza kuziswa yile veki izayo iyothusa.
Wamkelekile kusihlwa vale isiqendu 5
Olunye ixesha elilahlekileyo le-6 eliphindayo:
Iziqendu 1 & 2: I-LAX Icandelo 1 kunye ne-2 ″
Isiqendu 3: Wenza ntoni uKate
Isiqendu 4: Indawo
Isiqendu 5: Indlu yokukhanya
Isiqendu 6: Ukutshona kwelanga
Isiqendu 7: UGqr. ILinus
Isiqendu 8: Recon
Isiqendu 10: Iphakheji
Isiqendu 11: Ngovuyo nasemva koko
Isiqendu 12: Wonke umntu uyamthanda uHugo
Isiqendu 13: Umqeshi wokugqibela
Isiqendu 15: Ngaphesheya koLwandle
Isiqendu 14: Umgqatswa
indlela amandla okuvuka anokugqitywa ngayo
Isiqendu 16: Oko bakufelayo
Isiqendu 17: Isiphelo (uthotho lokuphela)
UKatelyn ungumfundi ophumelele kwiYunivesithi yaseMichigan State e-East Lansing, MI. Ngexesha lakhe lokuphumla uyakuthanda ukuchitha ixesha ebukele kwaye ebhala malunga NOKULAHLEKILEYO. Jonga ibhlog yakhe enezinto ezilahlekileyo lemvulube.blogspot.com yohlaziyo oluhambelana nokulahleka kwemihla ngemihla.
Ngesondo Kunye Nomzi
joss whedon wonder umfazi script pdf
UPaul ryan uvavanyo lwefowuni
umbethe wentaba umbethe umbethe
enkulu lebowski jesus gif
inkosi yamakhonkco amakhosikazi